ဧဝံဂေလိတရားကိုအတွက်2မိနစ္မ်ား — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဧဝံဂေလိတရားကိုဆိုတာဘာလဲ? မှ ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ အပေါ် Vimeo.
ငါ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ် ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့. ငါဝငျကမျြးထဲမှာ rap နိုင်လျှင်သူတို့ကငါ့ကိုမေးတယ်2မိနစ္မ်ား. ဤသူကားငါ၏ကြိုးပမ်းခဲ့သည်
Rikki Lewis က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Loveandwar09 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
W က. lynn Oriental • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
tina • သြဂုတ်လ 21, 2013 တွင် 10:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Stacie • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 12:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်